Itoobiya oo dhexdhexaadineysa Kenya iyo Soomaaliya - BBC News Somali
Madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul wasaare Abiy ayaa tagi doona Nairobi
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo Raysal wasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed ayaa ka wada hadlay muranka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya.
Labada mas'uul ayaa ku kulmay magaalada Adis Ababa oo booqasho rasmi ah oo 1 maalin ah uu maanta ku tegay madaxweyne Farmaajo.
War qoraal ah oo lasoo dhigay bogga rasmiga ah ee Ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu ku leeyahay Twitterka ayaa lagu sheegay in Farmaajo iyo Abiy ay ka wada hadleen xoojinta iskaashiga amni iyo nabadgelyo ee dalalka Geeska Afrika, xoojinta xiriirka Soomaaliya iyo Kenya, iyo sii wadida heshiisyada labada dhinac ee horumarinta dekedaha, iyo xiriirka Soomaaliya iyo Somaliland.
Wasiir dowlaha arrimaha dibada ee Soomaaliya Cabdiqaadir Axmed Khayr Cabdi ayaa u xaqiijiyay BBC in madaxda Soomaaliya iyo Itoobiya ay ka wada hadleen xiisada ka dhalatay muranka badda ee Muqdisho iyo Nayroobi.
Laakiin wasiiru dowlaha oo ka mid ah wafdiga madaxweynaha waxa uu intaa ku daray in muranka badda uu yahay waxa mugdiga geliyay xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya.
Wuxuu sheegay in mowqifka Soomaaliya ee la xiriira dacwadda badda uusan waxba iska bedelin islamarkaasna aysan ka noqon doonin dacwada hor taal maxkamada caalamiga ah ee ICj.
"labada dal waxa ay isku hayaan waa arinta Bada, Soomaaliyana mooqifkeedu waa mid cad, oo aan laheyn wax gabasho ah oo aanay ku jirin mugdi, wixii sharciga horyaalana waa sida loo hor dhigay, waana mowqif aan laga laabaneyn," ayuu yidhi wasiiru dowlaha arrimaha dibada ee Soomaaliya.
Dhanka kale waxa uu mas'uulkan sheegay inay diyaar u yihiin inay xal iyo heshiis kala gaaraan Kenya arrimaha kale la xiriira ganacsiga iyo isu socod labada dal ka dhexeeya.
"Balse wixii kale ee siyaasad ah ama diblomaasiyad ah ama ganacsi ah ama daris wanaag ah ama isu socod ah waxaan diyaar u nahay inaan si fiican ku xalino," ayuu BBC u sheegay wasiirka.
War dhawaan laga soo saaray madaxtooyadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Madaxweyne Farmaajo iyo Raysal wasaare Abiy Axmed si wadajir ah caawa ugu safrayaan magaalada Nayroobi.
Agaasimaha xafiiska warfaafinta ee madaxweynaha Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa sheegay in labada mas'uul ay berri kulan kula yeelan doonaan madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta.
Waxa ay saddexda hoggaamiye ka wada hadli doonaan "in dib loo soo celiyo, lana xoojiyo xiriirkii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya.
Iskaashiga Soomaaliya iyo Itoobiya
Madaxweyne Farmaajo oo galinkii hore ee maanta tagay Addis Aaba ayaa madaxda Itoobiya kala hadlay sidii loo amba qaadi lahaa xiriirka iskaashiga dhinaca ganacsiga ee labada dal.
Hase yeeshee dadka wax falanqeeya ayaa qaba fikir ku saabsan in Soomaaliya aysan waxba ka macaasheynin iskaashi ganacsi oo ay la yeelato Itoobiya.
Hadaba waxyaabaha ku gedaaman arrintan ayaan wax ka weydiinay Faysal Cabdi Roble oo ah aqoonyahan falanqeeya siyaasadda Geeska Afrika, sigaarana ugu takhakhusay arimaha Itoobiya.
"Soomaaliya wax faa'iido ah uguma jiraan arrimahan, sababtoo ah Soomaaliya waa dal kheyraad kala duwan leh, Itoobiyana waxay dooneysaa iney ka faa'iideysato oo ay maashusho kheyraadkaas, halka Soomaaliya aysan waxba ka heleyn Itoobiya dhankeeda", ayuu yidhi Faysal.